स्वास्थ्य Archives - खबरदारी न्युज
गाँजाको डाँठका टुक्रा मिसाएर बन्दै गरेको गोपाल शेर्पाको घर।गाँजाको डाँठका टुक्रा मिसाएर बन्दै गरेको गोपाल शेर्पाको…
पछिल्लो समयमा केही देशमा देखिएको मंकीपक्स संक्रमण थप देशहरुमा पनि देखिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, इजरायल, यूके, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, इटाली र स्वीडेनमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) ले जनाएको छ । योसँगै मंकीपक्स संक्रमण फैलिने देशको संख्या १५ पुगेको छ ।
याे भाइरस ८० भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको र शंकास्पद ५० बारे अनुसन्धान भइरहेको संगठनले जनाएको छ । मंकीपक्स संक्रमण भएका व्यत्तिहरुमा ज्वरो आउने, जीउ सुन्निने र ढाड, टाउको र मांसपेशी दुख्ने गर्छ । संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा बिमिराहरू देखा पर्न थाल्छन् र शरीरका अन्य भागमा फैलिने यस्ता खाले लक्षण देखा पर्ने संगठनले जनाएको छ ।
खासगरी हात र गोडाका पैतालामा बिमिराहरू बढी देखिन्छ । केही दिन निकै चिलाउने वा दुख्ने भए पनि बिमिराहरू बिस्तारै हराउँछन् । तर बिमिरा आएका ठाउँमा दाग भने रहिरहन सक्छ । यसको संक्रमण भएका दसमध्ये एक जनाको ज्यान जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । पश्चिम अफ्रिकामा मंकीपक्सका कारण मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यो भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सहज रूपमा भने सर्दैन, जसका कारण मंकीपक्स कोरोना जस्तो आम रूपमा फैलने सम्भावना देखिन्न ।
डब्लुएचओका महानिर्देशक वैशाख ८ गते नेपाल आउने
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयस नेपाल आउने भएका छन्।
स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलका अनुसार गेहब्रेयस सहितको टोली वैशाख ८ गते नेपाल आइपुग्नेछ। उनी तीन दिने सद्भाव भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेका हुन्। नेपालमा रहँदा गेहब्रेयसले विभिन्न महत्वपूर्ण भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।
अब मोबाइलबाटै स्वास्थ्य बीमा उपचार खर्च हेर्न सकिने
काठमाडौं — स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकले अस्पतालमा उपचार गर्दा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी मोबाइलबाट पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले छैटौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा २५ चैतदेखि मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बर्सौलाले ‘एचआईबी’ नामक मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गर्न लागेको बताए ।
बर्सौलाका अनुसार उक्त एप्समा बिमितिको के के उपचार भयो रु कति खर्च भयो रु अब कति रकम बाँकी छ भन्नेबारेका सबै विवरण हेर्न सकिनेछ । ‘एचआईबी मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत नागरिकलले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी पाउँछन् । जसले गर्दा रकम दावीमा पनि पारदर्शीता हुने देखिन्छ,’ बर्सौलाले भने ।
यस्तैगरी, शुक्रबार नै स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्ने एप्लिकेसन पनि सार्वजानिक हुनेछ । उक्त एप्लिकेसनमार्फत एक पटक बीमामा आबद्ध भएका बिमितिले मोवाइलमार्फत नै नवीकरण गर्न सक्नेछन् । बर्सौलाले भने, ‘अहिलेसम्म दर्ता सहयोगीले नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अबदेखि बिमितले घरमै बसेर पुनः नवीकरण गर्न सक्छन् ।’
२०७२ चैत २५ देखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । पाँच जनाको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ रकम तिर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क गर्न सक्छन् ।
परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।
६ वर्षमा २० प्रतिशत नागरिकमात्रै आबद्ध
हालसम्म ५३ लाख ४ हजार ७० जना अर्थात २० दशमलव ३ प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको ६ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार ‘तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ मूल नारासहित स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइँदै छ ।
कमजोर गुणस्तर, झन्झटिलो प्रक्रिया स् स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने खतरा
पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म २० प्रतिशत आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये नवीकरण गराउनेको दर ७० प्रतिशत मात्र रहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
देशभर कूल बीमित परिवार १५ हजार ८ सय ५१४ अर्थात कुल परिवार संख्याको २७ दशमलब ७९ प्रतिशत मात्र छन् । कूल बीमितमध्ये ३९ दशमलब ३९ अर्थात २० लाख ८९ हजार ५९९ जनाले सेवा लिएका छन् ।
कुल बिमितमध्ये अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या चार लाख ८८ हजार ४, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ६ लाख ३४ हजार ७३५, एचआईभी संक्रमित परिवार बीमित सदस्य संख्या २५ हजार २८९ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अति अशक्त अपागंता भएका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ९३ हजार ६२९, कुष्ठरोग संक्रमितको परिवारको बीमित सदस्य संख्या दुई हजार ८४९, एमडिआर क्षयरोगी परिवारको बीमित सदस्य संख्या दुई हजार ४७४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ८३ हजार ६२६ बीमा आबद्ध भएका छन् ।
‘स्वास्थ्य बीमा छ भन्नु मात्रै हो’
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकको अभाव भएको तथा उपलब्ध चिकित्सक एवं कर्मचारीको अपनत्व नलिएको कारणले बिमित नागरिकले सेवा पाउन कठिन भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक वर्सौला बताउँछन् ।
कर्मचारीको स्थायी दरवन्दी नहुदा र सर्वसाधारणलाई बीमाको विषयमा अझै बुझाउन नसक्दा नवीकरण गर्ने बिमितको संख्यामा कमी आएको उनको भनाइ छ ।
‘सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायक संस्थामा व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ । जसलाई समधान गर्न बोर्डमा जनशक्ति बढाउनु पर्नेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय निकायले बीमाको स्वामित्व तथा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ,’ बर्सौलाले भने ।
सम्झौता हुदाहुदै किन अवरोध भयो डम्पिङ साइड ?
असार मसान्त सम्म डम्पिङ साइड सम्झौता नगरपालिका र जग्गा धनि संग भएको छ ।
डडेल्धुरा (दिपक राज भट्ट) , डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापन विगत १० दिन देखि बाधा आएको छ कारण हो डम्पिङ साइडको अभाव ।
उग्रतारा मेलौली सडक खण्डमा रहेको डम्पिङ साइडमा अमरगढी नगरपालिकाले २०७९ असार सम्मका लागि सम्झौता गरेको थियो तर एकाएक अवरोध भयो, वजेट विनियोजनका लागि खिचातानि गर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै रोक्न पर्ने चेतावनि दिईरहेका छन। अवरोध पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अमरगढी नगरपालिकाको कार्यालय मा वसेको सर्व पक्षिय वैठकमा समेत सो ठाँउमा फोहर फाल्न नदिने वार्ड नं ६ को अडान कायमै छ। फोहरको गाडि पठाए आगो लगाईदिने स्थानियले धम्कि पुर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । एकातिर फोहर रोक्ने र अर्का तिर व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउने कार्य नमगरपालिमा चलिरहेको छ ।
सरकारले स्थानिय तहको चुनाव बैशाख ३० गते निर्धारण गरे संगै राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुले एक पार्टिकोले अर्को पार्टिको लाई विवादमा ल्याउने गरेका छन् । २०७४ को प्रदेस र संघको निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा पनि १५ बर्षको समझौता एकाएक ९ वर्ष मै तोडेर डम्पिङमा अवरोध गरेको नगरपालिकाले जानकारि दिएको छ ।
यस पटक पनि अमरगढी नगरपालिकामा पनि डम्पिङ साइडको सम्झौता हुदाहुदै पनि कार्यान्वयन गर्न नदिएको सुचना अधिकारी लाल वहादुर साँउदले वताए।
के भन्छन जग्गा धनी ?
हामी ले त भाडामा दिएका हौं, नगरपालिकाले व्यवस्थित गरेर फाल्दा हुन्छ, मैले रोजगारि पाए भनेर ईर्श्याले केही मान्छेले रोक्न खोजेको छ म गरिव देखेर हेप्न खोजियो जग्गा धनी सीता भाटले दुखेसो गरिन।
मेयर ओझा नेपाली काङग्रेसको गढ मानिने अमरगढी नगरपालिमा विजयी भएका थिए ।
ओझाले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकालमा डडेल्धुरा स्मार्ट सिटिको योजना लाई अगाडि बढाएका छन् । विभिन्न चरणमा स्मार्ट सिटिको जग वसाउने गरि विकासको सुरुवात भईरहेको छ, भने अन्य पुर्वाधारका कार्यहरुको थालनी समेत भएको छ । विगतको तुलनामा अमरगढी पार्क निमार्ण, कस्या टाकुरा, रावतोली गुफा, घटाल थान सुधार का कार्यहरु मा निकै परिर्वतन आएको छ स्पस्ट हेर्न सकिने नगरवाशि बताउछन् ।
डम्पिङ साइड निमार्णका लागि मुख्य चुनौती बन्यो जग्गा अभाव मेयर ओझा ः
अमरगढी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थानपन गर्नका लागि डम्पिङ साइड निमार्ण गर्न नगरपालिका संग बजेट भए पनि जग्गा अभावका कारणले फोहर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती नै बनेको छ । हामीले अस्थायी प्रयोजनका लागि भाडामा व्यक्तिगत जमिन लिएर वयवस्थापन गरेका छौ तर यो दिगो भने छैन् । फोहर व्यवस्थापनका लागि उचित जमिनको आवश्यकता पर्ने भएकाले पटक पटक सार्वजनिक सुचना आव्हान गरेउ ४ वटा स्थानमा सहमति गरिसकेको भए पनि केहि व्यक्तिहरुले रोक्ने प्रपन्च गरेका कारण अन्यौलता रहेको मेयर ओझाको भनाई छ। यसका लागि सबैले वन समुह सार्वजनिक ऐलानि पर्ति जग्गामा सर्वपक्षिय सहमतिको खाचो रहेकाले समुन्वय गर्नु जरुरि छ ।
भागेश्वरमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान शुरु हुँदै
डडेल्धुरा (दिपक राज भट्ट) ः देश व्यापि रुपमा रहेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान भागेश्वर गाउपालिकामा पनि सुरु हुने भएको छ ।
आज भागेश्वर गाउपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले एक सरोकारवालाहरु संगको अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दे अभियानको घोषण गरेको छ । अभियान यहि चैत्र २५ देखि २८ गतेसम्म लागु हुने छ ।
पालिकाका पाचै वडामा ३० खोप केन्द्र राखेको शाखा प्रमुख मान बहादुर शाहुले जानकारि दिए । टाइफाइड विरुद्धको खोप १५ महिना देखि १५ बर्ष सम्मका बालबालिकामा लगाईने छ ।
टाइफाइड व्यक्टेरियल रोग हो ।
यो रोगका लक्षहरुमा ः
उच्च ज्वरो आउने, जाडो हुने,पसिना आउने, टाउको दुख्ने,जिउ दुख्ने हुन्छ ।
टाइफाइड बाट बच्न के गर्नपर्छ ः
सरसफाईमा जोड दिने ।
साबुनपानीले हात धुने, खाना राम्रो संग पकाएर खाने, खाना छोपेर राख्ने ।
टाइफाइडको जटिलता कति छ त ?
सानो आन्द्रमा घाउ हुने रगत वग्ने ,प्वाल पर्ने । विभिन्न भागमा संक्रमण फैलिएर असर देखिने , मस्तिष्कमा समस्या आउने हुन्छ ।
टाइफाइडको उपचार नगरेमा करिव १० प्रतिसत ले ३ महिना भन्दा पछिसम्म अरुलाई सार्न सक्ने र ५ प्रतिसत पित्त थैलिमा रहि संक्रमण गर्ने हुन्छ ।
यो खोप कस्तो अवस्थामा दिनु मिलदैन त ?
गम्भिर एर्लर्जि भएमा , एड्स भएको भएमा
उच्च ज्वरो , सिकिस्त बिरामी भएमा
गर्भपति महिला लाई , स्तनपान गराईरहेकि आमाहरु लाई
अनुसन्धानका अनुसार यो खोपको प्रभावकारिता ९७ प्रतिसत रहेको छ ।
भागेश्वर गाउपालिकाका चार हजार चार सय बालबालिका यो अभियान बाट सेवा लिनेछन् । यो हाल अभियानको रुपमा रहे पनि सेवा भने नियमित रुपमै रहने स्वास्थ्यकर्मि मदन सिंह भाटले बताए ।
खोप लक्षित वर्ग सबैले लगाउनु शाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।